पीपीसी स्वचालन: कुञ्जी शब्दहरू जंगली गयो | Martech Zone
पीपीसी स्वचालन: कुञ्जी शव्द जंगली भयो
मंगलवार, मार्च 15, 2011 सोमबार, अक्टोबर 12, 2015 क्रिस ब्रोस
दुई महिना अघि हामीले एउटा कम्पनीको बारेमा सुनेका थियौं एक मिलियन भन्दा बढी खोजशब्दहरूमा बोलपत्र। कम्पनीका बजारका ब्यक्तिहरूले सोचे कि यो साँच्चिकै राम्रो थियो। साँच्चै?
यदि एक संग ठूलो पर्याप्त पीपीसी बजेट छ, यति धेरै कुञ्जी शब्दहरुमा बिड लगाउन के गलत हुन सक्छ? ब्रॉड, "फ्याट हेड" मिलानमा जोड, कुनै नकारात्मक खोजशब्द डिप्लोयमेन्ट, र स्वचालन / गतिशील कुञ्जीशब्द सम्मिलितको अन्धाधुन्ध प्रयोगले अप्रभावी / दुर्भाग्यपूर्ण विज्ञापनको प्रदर्शन गर्दछ।
एक बर्ष पहिले, शिशु-सिटरका लागि अनलाइन खोजी गर्ने क्रममा, हाम्रो पीपीसी परामर्शदाताहरू मध्ये एक "बेबीसिटरहरू बिक्री वा लीजको लागि!" टाउटिंग विज्ञापनमा आइपुगे।
हाम्रो अनुभवमा, त्यस्ता विज्ञापनहरू स्वचालित रूपमा उपकरणहरूले सिर्जना गर्दछन् जसले वास्तविक खोजहरू र सामान्य पाठ विज्ञापनहरूमा आधारित कुञ्जी शब्द उत्पन्न गर्दछ। यसैले, तपाइँ विज्ञापन समूहहरूसँग समाप्त हुनुहुनेछ जसमा हास्यास्पद संख्याको कीवर्डहरू छन् (हजारौं मा हजारौं, प्रायः एक अर्कासँग सम्बन्धित छैन) र पीपीसी अभियानहरू जुन प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गर्न असम्भव छ।
यहाँ केहि अधिक भर्खरका उदाहरणहरू छन्:
खोजीको लागि केटा प्रस्ताव ट्रिगर गरियो "बिक्रीमा छूट केटा!" जब कम्पनीले वास्तवमै केटाहरूको लुगा बिक्री गरिरहेको थियो।
एक कम्पनी बेच्दै प्लम्बिंग आपूर्ति खोज खरीद सामानको लागि देखाए।
एक सबैभन्दा ठूलो अनलाइन पुस्तक भण्डारको लागि देखाईयो पीईटी। खराब, प्रदर्शन URL मा हेर्नुहोस्। आँगनको पाल्तु जनावर, वा पुस्तकहरूसँग के गर्नुपर्दछ?
त्यस्ता उदाहरणहरू पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ यदि तपाईं सामान्य कुञ्जी शब्दहरूमा केही खोजी गर्नुहुन्छ भने। फेरी, एक पटक केहि बेरमा, तपाईले अधिक विशिष्ट खोजमा एउटा रत्न पाउनुहुनेछ जब तपाईं यसको कम्तिमा अपेक्षा गरिरहनु भएको थियो।
सबै माध्यमबाट, लाभ पीपीसी स्वचालन जब तपाईं जनशक्ति मा बचत गर्न आवश्यक छ, तर प्रभावकारिताको खर्चमा यो नगर्नुहोस्। जब तपाइँको पीपीसी अभियानहरू राम्रोसँग अनुकूलित हुँदैनन्, तपाइँ संग संग संगै पीपीसी कीवर्डहरू जंगली गयो.
तपाईंले देख्नु भएका कथाहरू सत्य छन्; केवल कम्पनी नामहरू अज्ञानीहरूलाई बचाउन मेटियो।
टैग: विज्ञापन स्वचालनस्वचालनकिवर्डभुक्तान गरिएको विज्ञापन स्वचालनभुक्तान गरिएको खोजीभुक्तान गरिएको खोज स्वचालनपीपीसीppc स्वचालन
जानकारीको दृश्य प्रदर्शन: ओम्न्युर्ट बनाम वेबट्रेंडहरू
मालिसियस वर्डप्रेस साइट पुनर्स्थापित गर्दै